မုဒိမ်းသမားနှင့် အငုံစိတ် -
February 5, 2018 - by Saing Pyin Gyi
ကာမကို စပ်ယှက်ချင်တာချင်းအတူတူ လမ်းပေါ်က ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဆက်ဆံလိုက်ရလို့ အာသာပြေမသွားဘူး။
ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေ မယ်သီလရှင် လို့ သူတော်စင် တွေ ကျောင်းဆရာမလေးတွေကို စော်ကားရမှ အာသာပြေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။
တချို့ လူတွေက နှိပ်စက်ညှင်းပန်းရတာကိုးကိုကြိုက်တာ ကြိုက်တယ်ဆိုတာထက်သာယာတယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်။
ဘယ်နှယ့် ကာမတစ်ခါဆက်ယှက်ဖို့အရေး တစ်ဘက်သားကို အမျိုးစုံညှင်းပန်း ရိုက်ပုတ်ကန်ကျောက်လည်ပင်းညှစ် ဝက်အူလှည့်နဲ့ထိုး…
တစ်ဘက်သားက ငိုကြီးချက်မနဲ့ တောင်းပန် အော်ဟစ်တော့မှ သားမယားပြုကျင့်ပြီး ကာမဆန္ဒပြည့်သွားရတဲ့ အရူးတွေရှိတယ်။
ကိစ္စပြီးလို့ သတိ ဝင်လာတော့ ကြောက်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်ရော….
လောလောလတ်လတ်ဖြစ်သွားတဲ့ တက်စီဆရာနဲ့ နေပြည်တော်ကဝန်ထမ်း အမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုကြည့် ဒါဟာ အငုံ့စိတ်ပဲ..
Inferiority complex ဆိုတာ အငုံ့စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာ သူ့အလိုလိုဝင်နေတဲ့ သိမ်ငယ်နိမ့်ကျစိတ်ပါ။
သိပ်ခံရခက်နေတာပေါ့ သူများလို သူ့ဘဝ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရှိဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လေးစားအထင်ကြီးမှုမရဘူး။နေရာမရဘူး။
အဲဒီစိတ်ဟာ ယောကျာ်းမှာရော မိန်းမမှာရောဖြစ်တတ်တယ်။တချို့သိသိသာသာရှိနေတတ်တယ်။တချို့မသိမသာရှိနေတတ်တယ်။
အဲဒီ သိမ်ငယ်နိမ့်ကျနေတဲ့ အငုံ့စိတ်ရဲ့ ထွက်ပေါက်အဖြစ် တော်တဲ့လူတွေ၊ မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေ၊ ရိုးသားဖြူစင်သူတွေကို စော်ကားလိုက်ရမှ တိုက်ခိုက်လိုက်ရမှ အာသာပြေသွားကြတာမျိုးရှိတယ်စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးပေါ့လေ…။
ခု ဟော့နေသော ဗေဒင်ဆရာ ဇါတ်လမ်းသည်လည်း သည်သဘောအတိုင်းပဲ။လာကြတဲ့ ကလေးမလေးတွေက သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ရည်ရည်မွန်မွန်လေးတွေပါမယ်။
ဒီမိန်းကလေးတွေကို ရင်ဘတ်လက်နဲ့ထိပြီး ယတြာလုပ်တယ်ဆိုတာ တမင်သက်သက် နှာဘူးထလိုက်တာပဲလို့မြင်မိတယ်။
ဒါတွေကိုဖေါ်ထုတ်ကြဖို့လိုတယ်။ထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသံတွေကို အားရမိတယ်။ ရှက်ရမှာက သူတို့လိုကောင်တွေပါ….
အမျိုးသမီးတွေ ဒီလို စော်ကားခံရတယ်ဆို မိသားစု တွေကိုယ်တိုင်က ဒါနင်အနေအထိုင်မတတ်လို့ဖြစ်ရတာ ဆိုပြီး အမျိုးသမီးပေါ်ကိုပဲ ပုံချတတ်ကြတယ်။
သူတို့ကပဲ အမလေး ရှက်လိုက်တာလို့ ဖြစ်ရသေးတယ်။ ဒါကလည်း ကျွန်မတို့ လူမှူအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာ အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
အမျိုးသားကိုမှ မဟာလူသား၇ယ်လို့ မသိမသာပစားပေးထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဒီလိုကောင်တွေ ပိုပြီး လက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်လာတယ်။
အမျိုးသမီးက ရွလို့၊ ကလက်လို့ ၊ စကတ်တိုလို့ ၊ ရင်သားကြီးလို့ ၊ အိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ စသည်ဖြင့် အမျိုးသမီးပေါ် အပြစ်မြင်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဒီလိုခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရှက်ပြီး မပြောရဲကြတော့ဘူး။
ငါ့ကိုတော့ ထတယ် ရွတယ်လို့ထင်ကြတော့မှာပဲ ဆိုပြီးငြိမ်ခံနေလိုက်ကြတာများတယ်။အဲတာမျိုးကအဆိုးဆုံးပဲ ကြာလာလေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာကြီးလာလေပဲ။ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဟာ ဘဝမှာ ဘာမှဖြစ်မလာကြတော့ဘူး။
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်သံ အင်တာဗျူးသူ အိုပရာဝင်းဖရေး Oprah Winfrey ဟာ ငယ်ငယ်တုန်းကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေ ပေါက်ဖွားလာတယ် ။
ငယ်ဘဝမှာ အကြိမ်ကြိမ် rape လုပ်တာခံခဲ့ရတယ်တဲ့ ၁၄နှစ်သမီးနဲ့ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့ဘဝကို ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။အခု သူဟာ US3billions ချမ်းသာတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ..။
ဒါမျိုးအလုပ်ခံရလို့ ရှက်ပြီး မပြောရဲမဆိုရဲ ကျိတ်ခံ ကိုယ့်ဘာသာ ထီးရိုးနဲ့ထိုးချ အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ရင်တော့ ဘာမှဖြစ်လာကြမှာမဟုတ်ဘူး မိန်းမတွေရေ….
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ သတ္တိရှိကြပါ။သူများဖြစ်ရင်လည်း အတင်းမတုပ်ကြပါနဲ့ ။မကဲ့ရဲ့ကြပါနဲ့ ။မနှိမ်ကြပါနဲ့။မထိုးနှက်ကြပါနဲ့။အားပေးကူညီကြပါ။
မနေ့ကပဲ ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောမိတော့ သူတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်း တစ်ခါတုန်းကဆရာ တစ်ယောက်ဆီ ဗေဒင်သွားမေးတော့ ညီမလေး ရည်းစား ညီမလေးဆီပြန်လာစေချင်တယ်ဆို ညီမလေး မိန်းမကိုယ်ကို အမျိုးသား တစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါနဲ့ ခဏလောက်ထိထားပေးရင် ပြန်လာလိမ့်မယ်.. လို့ပြောသတဲ့
အဲဒီကိစ္စလည်း ဆရာကူညီမယ်ဆိုလို့ သူတို့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးလာကြသတဲ့လေ…
ဒါမျိုးဆရာတွေတစ်ယောက်မကရှိနိုင်သေးတယ်။ဒီလို ကိစ္စတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ကြမှာလဲ…။
ခုပဲ သတင်းတစ်ပုဒ်တက်လာတယ် စမ်းချောင်း ဟုမ်းလမ်းနားမှာ ၄နှစ်ကလေးမလေး ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သားမယားအဖြစ်ဆက်ဆံခံထားရတာလဲ တွေ့ရပါသတဲ့။
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတစ်ခုမှာ ၅နှစ်လောက် ကလေးမလေးက ဘယ်လိုထွက်သလဲဆိုရင် ….
သမီးလေးရယ်..အဖေမခံနိုင်တော့လို့ပါ သမီးလေးရဲ့လို့ သူ့အဖေကပြောပြီး လုပ်လိုက်တာပါတဲ့။
ကျွန်မအဒေါ်တွေ နေပြည်တော်ကို express ကားကြီးနဲ့သွားကြတာ ပါလာတဲ့ သူတို့ညီမတစ်ယောက် ထိုင်နေတဲ့ ခုံကြားထဲကို အနောက်ဖက်ကနေ လက်ကြီးတစ်ဖက်ဝင်ဝင်လာပါသတဲ့။အိပ်နေရင်းယောင်ပြီးနှိုက်မိတာဆိုပဲ။
တချို့ကောင်တွေလည်း ဘာမှ အလုပ်အကိုင် မည်မည်ရရ မရှိတော့ အားအားရှိ မြို့တစ်ပတ်ကားလိုက်စီးရင်း ကားပေါ်တက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ပစ္စည်းနဲ့ ထိထားလိုက်ရမှ ၊ ထောက်ထားလိုက်ရမှ ပွတ်သပ်လိုက်ရမှကျေနပ်ကြတယ်တဲ့။
တချို့မိန်းကလေးတွေ ညအပြန် မိုးချုပ်တာရှိတယ် လမ်းထောင့်ကစောင့်ပြီး သူ့ဟာကြီး လှန်ပြလိုက်ရမှ အာသာပြေတဲ့ လူတွေရှိသတဲ့..။
ဖဘမှာလဲ တစ်ဒုက္ခ…အမျိုးသမီး အကောင့်တွေထဲ သူတို့ အင်္ဂါပုံတွေ လာပို့တယ်..Sex chat နိုင်မှ လာအပ်ပါဆိုတဲ့ သုတ်ကြောင် အကောင့်မျိုးတွေ့ဖူးတယ်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီ ဖဘကနေ အမျိုးသမီးနာမည်နဲ့အကောင့်ကစာပို့တယ်။Sex chat လားရှင့်တဲ့..
သူဘအကောင့်ထဲဝင်ကြည့်တော့မှ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ် သက်ဆိုးမရှည်မဲ့ရုပ်နဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်။
သမီးတပည့်လေးတစ်ယောက်ဆီလဲ မကြာခင်ကပဲ ဖဘကနေ လူတစ်ယောက်က စာပို့တယ်။မင်းရဲ့စကတ်အောက်က ဓါတ်ပုံကိုငါရိုက်ထားတယ်။ဖဘမှာငါဖြန့်မယ်တဲ့….
စကတ်အောက်ကပုံဆိုတော့ ဘာလဲ ပုရွတ်ဆိတ်လား ၊ခါချဉ်လား၊ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ…။
ဘယ်က ပုံ မှုန်တုန်ဝါးတားတွေရိုက်လာမှန်းလဲမသိပါဘူး။လာပြပြီးအခြေအမြစ်မရှိဘဲ ထကြောင်တာ ။ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ခြိမ်းခြောက်မယ် လှည့်ဖျားမယ် ရမလားပေါ့။
သတ္တိရှိတဲ့ မိန်းကလေးက screen shot တွေရိုက်ပြီး အမျိုးသမီးရေးရာတွေရော ရဲစခန်းရော တိုင်တော့ ပျောက်သွားပါသတည်းပေါ့…။
အဲဒါမျိုးတွေကြုံခဲ့ရင် screen shot တွေရိုက်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ Chat box setting ကိုချိန်ပါ။သူငယ်ချင်း မဟုတ်တဲ့လူဆီက msgတွေ မဝင်နိုင်အောင် လုပ်ထားပါ။
ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကတော့ ဖုံးတစ်ခုဝင်လာတယ်။ကိုင်လိုက်တော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်…
အမရေ တစ်ခုလောက်ပြောချင်လို့ပါ ဆိုတော့ ဘာလဲ ပေါ့။အမရဲ့ေ_ာက်_ုတ်လေးကို ကျွန်တော့် _ီးနဲ့ _ှိုးချင်လို့ တဲ့။ရုတ်တရက်ထူပူပြီး ဖုံးချလိုက်မိတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မက ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေကို စာသင်ပေးနေတာ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ gender ကျားမ ခွဲခြားမှုအရ ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတဲ့ တန်းဝင်နေတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကူနှုတ်သရမ်းတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်မဟာ အဲဒီအချိန်မှာ တကယ် မွန်မြတ်သောအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေခဲ့တယ်။
ဖုံးက တောက်လျှောက်ဝင်နေလို့ ring off လုပ်ထားရတယ်။နောက်တော့ ဖုံးကိုင်လိုက်တယ် ။ဒါပဲထပ်ပြောတယ်။မင်းအသက် ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတော့ ၂၀တဲ့ ..။
ငါသာ အသက်၂၀နဲ့ ကလေးအမေဖြစ်ခဲ့ရင် နင်ဟာငါ့သားအရွယ်လို့ပြောပြီး သူ့နံပါတ်ကို call blocker ထဲထည့်လိုက်ရတယ်။
စဉ်းစားကြည့်တော့ ဝမ်းနည်းစရာကြီး စိတ်ယဉ်ကျေးမှု ချို့တဲ့ခြင်းဟာ ကျွန်မတို့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှူပဲ။
နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးပြောရရင် လူုစွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေ ဆုံးရှုံးနေတာပဲ..။ဒီသတင်းတွေကြားရတာလည်း စိပ်လာတယ်။
ကာမဆန္ဒဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိတယ်။အထိအတွေ့ဆိုတာ လူတိုင်းသာယာတတ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ စည်းတွေကျော်ပြီး မြင်မြင်သမျှ သရမ်းချင်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ တိရိစ္ဆာန်လောက်ပဲအသိရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲ..။
ဒါမျိုးက မြန်မာပြည်မှာမှမဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ် ။
အမေရိကားမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များဆီက ကမ္ဘာ့ အိုလံပစ် ကော်မတီထဲမှာတောင်ပါတဲ့ Physiotherapist တစ်ယောက် ရဲ့ Sexual abuse ဆိုတဲ့ caseတက်လာဖူးတယ်။
အိုလံပစ်ထဲပါတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား ဆယ်ကျော်သက်တွေ ကစားကြရင် အကြောညပ်ပြန်ပြီ ကြွက်သားနာပြန်ပြီနဲ့သူ့ဆီရောက်လာတော့ နှိပ်နယ်ပေးရင်း မဆိုင်တာတွေလျှောက်ကိုင်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ…
နောက်တော့ #metoo ဆိုတဲ့ ကျွန်မကိုလဲဒီလိုလုပ်တယ် …..ကျွန်မကိုကျဒီလိုပါနဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသံတွေထွက်လာတော့ ကျသွားတယ်။
ထောင် ၁၆၅နှစ် …..လူ၃ခါလောက်ပြန်ဖြစ်လို့ရတဲ့ နှစ်ကြီးသမားသေရင်တောင်မကျွတ်ဘဲ အထဲဆက်နေရမှာ..ထားပါတော့..သူများနိုင်ငံမို့ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်..
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလောက်အတင့်ရဲနေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို.ဘယ်လို ဆုံးမကြမှာလဲ။ဖဘပေါ် ညီညာဖျဖျဝိုင်းဝန်း တက်ဆဲနေရုံနဲ့ ပြီးမသွားဘူး။
သေဒဏ်ချပါစေဆုတောင်းတော့လည်း သတ္တဝါတစ်ဦးရဲ့အသက်မို့ နေရင်းထိုင်ရင်း အကုသိုလ်များရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဒါမျိုးတွေလုပ်ရလဲဆိုတာ ပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ရင်လုပ် မလုပ်နိုင်ရင်တော့လည်း အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ ၊ မြွေပွေးခါးပိုက်ပိုက်တွေ ဘယ်နားထားရမှန်းမသိတဲ့ချီးထုပ်တွေပြုမရပြင်မရ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတဲ့ အောက်တန်းစားတွေ သုတ်ကြောင်ဖို့ကလွဲလို့အဖြစ်မရှိတဲ့ဟာတွေ…
သေ..အေးရော မြန်မြန် သတ်ပစ်လိုက် ကောင်းတယ်….။
ဒီလိုမျိုးမုဒိန်းမှူတွေ မဖြစ်ရလေအောင် share ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ…။
ကာမကို စပျယှကျခငျြတာခငျြးအတူတူ လမျးပျေါက ပွညျ့တနျဆာနဲ့ ဆကျဆံလိုကျရလို့ အာသာပွမေသှားဘူး။
ရိုးသားဖွူစငျတဲ့ကလေးငယျလေးတှေ မယျသီလရှငျ လို့ သူတျောစငျ တှေ ကြောငျးဆရာမလေးတှကေို စျောကားရမှ အာသာပွသှေားတဲ့သဘောရှိတယျ။
တခြို့ လူတှကေ နှိပျစကျညှငျးပနျးရတာကိုးကိုကွိုကျတာ ကွိုကျတယျဆိုတာထကျသာယာတယျလို့ပွောရငျပိုမှနျမယျ။
ဘယျနှယျ့ ကာမတဈခါဆကျယှကျဖို့အရေး တဈဘကျသားကို အမြိုးစုံညှငျးပနျး ရိုကျပုတျကနျကြောကျလညျပငျးညှဈ ဝကျအူလှညျ့နဲ့ထိုး…
တဈဘကျသားက ငိုကွီးခကျြမနဲ့ တောငျးပနျ အျောဟဈတော့မှ သားမယားပွုကငျြ့ပွီး ကာမဆန်ဒပွညျ့သှားရတဲ့ အရူးတှရှေိတယျ။
ကိစ်စပွီးလို့ သတိ ဝငျလာတော့ ကွောကျပွီး သတျပဈလိုကျရော….
လောလောလတျလတျဖွဈသှားတဲ့ တကျစီဆရာနဲ့ နပွေညျတျောကဝနျထမျး အမြိုးကောငျးသမီးလေးကိုကွညျ့ ဒါဟာ အငုံ့စိတျပဲ..
Inferiority complex ဆိုတာ အငုံ့စိတျလို့ချေါပါတယျ။စိတျထဲမှာ သူ့အလိုလိုဝငျနတေဲ့ သိမျငယျနိမျ့ကစြိတျပါ။
သိပျခံရခကျနတောပေါ့ သူမြားလို သူ့ဘဝ ဖွဈဖွဈမွောကျမွောကျမရှိဘူး။ပတျဝနျးကငျြရဲ့ လေးစားအထငျကွီးမှုမရဘူး။နရောမရဘူး။
အဲဒီစိတျဟာ ယောကျြားမှာရော မိနျးမမှာရောဖွဈတတျတယျ။တခြို့သိသိသာသာရှိနတေတျတယျ။တခြို့မသိမသာရှိနတေတျတယျ။
အဲဒီ သိမျငယျနိမျ့ကနြတေဲ့ အငုံ့စိတျရဲ့ ထှကျပေါကျအဖွဈ တျောတဲ့လူတှေ၊ မွငျ့မွတျတဲ့သူတှေ၊ ရိုးသားဖွူစငျသူတှကေို စျောကားလိုကျရမှ တိုကျခိုကျလိုကျရမှ အာသာပွသှေားကွတာမြိုးရှိတယျစိတျရောဂါတဈမြိုးပေါ့လေ…။
ခု ဟော့နသေော ဗဒေငျဆရာ ဇါတျလမျးသညျလညျး သညျသဘောအတိုငျးပဲ။လာကွတဲ့ ကလေးမလေးတှကေ သနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့ ရညျရညျမှနျမှနျလေးတှပေါမယျ။
ဒီမိနျးကလေးတှကေို ရငျဘတျလကျနဲ့ထိပွီး ယတွာလုပျတယျဆိုတာ တမငျသကျသကျ နှာဘူးထလိုကျတာပဲလို့မွငျမိတယျ။
ဒါတှကေိုဖျေါထုတျကွဖို့လိုတယျ။ထှကျလာတဲ့အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အသံတှကေို အားရမိတယျ။ ရှကျရမှာက သူတို့လိုကောငျတှပေါ….
အမြိုးသမီးတှေ ဒီလို စျောကားခံရတယျဆို မိသားစု တှကေိုယျတိုငျက ဒါနငျအနအေထိုငျမတတျလို့ဖွဈရတာ ဆိုပွီး အမြိုးသမီးပျေါကိုပဲ ပုံခတြတျကွတယျ။
သူတို့ကပဲ အမလေး ရှကျလိုကျတာလို့ ဖွဈရသေးတယျ။ ဒါကလညျး ကြှနျမတို့ လူမှူအသိုငျးအဝိုငျးမှာ ဝမျးနညျးစရာ အခကျြတဈခုဖွဈတယျ။
အမြိုးသားကိုမှ မဟာလူသား၇ယျလို့ မသိမသာပစားပေးထားတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ ဒီလိုကောငျတှေ ပိုပွီး လကျရဲဇကျရဲဖွဈလာတယျ။
အမြိုးသမီးက ရှလို့၊ ကလကျလို့ ၊ စကတျတိုလို့ ၊ ရငျသားကွီးလို့ ၊ အိမျပွနျနောကျကလြို့ စသညျဖွငျ့ အမြိုးသမီးပျေါ အပွဈမွငျတတျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ဒီလိုခံရတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော ရှကျပွီး မပွောရဲကွတော့ဘူး။
ငါ့ကိုတော့ ထတယျ ရှတယျလို့ထငျကွတော့မှာပဲ ဆိုပွီးငွိမျခံနလေိုကျကွတာမြားတယျ။အဲတာမြိုးကအဆိုးဆုံးပဲ ကွာလာလေ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွသနာကွီးလာလပေဲ။ဒီလိုအမြိုးသမီးတှဟော ဘဝမှာ ဘာမှဖွဈမလာကွတော့ဘူး။
ကမ်ဘာကြျော ရုပျသံ အငျတာဗြူးသူ အိုပရာဝငျးဖရေး Oprah Winfrey ဟာ ငယျငယျတုနျးကဆငျးရဲတဲ့မိသားစုကနေ ပေါကျဖှားလာတယျ ။
ငယျဘဝမှာ အကွိမျကွိမျ rape လုပျတာခံခဲ့ရတယျတဲ့ ၁၄နှဈသမီးနဲ့ မလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျရခဲ့တယျ။ဒါပမေဲ့ သူ့ဘဝကို ရဲရဲရငျ့ရငျ့ ရငျဆိုငျခဲ့တယျ။အခု သူဟာ US3billions ခမျြးသာတဲ့ ကမ်ဘာကြျောတဈယောကျဖွဈခဲ့ပွီ..။
ဒါမြိုးအလုပျခံရလို့ ရှကျပွီး မပွောရဲမဆိုရဲ ကြိတျခံ ကိုယျ့ဘာသာ ထီးရိုးနဲ့ထိုးခြ အဲဒါမြိုးတှလေုပျရငျတော့ ဘာမှဖွဈလာကွမှာမဟုတျဘူး မိနျးမတှရေေ….
ကိုယျကိုယျတိုငျလဲ သတ်တိရှိကွပါ။သူမြားဖွဈရငျလညျး အတငျးမတုပျကွပါနဲ့ ။မကဲ့ရဲ့ကွပါနဲ့ ။မနှိမျကွပါနဲ့။မထိုးနှကျကွပါနဲ့။အားပေးကူညီကွပါ။
မနကေ့ပဲ ညီမလေးတဈယောကျနဲ့ စကားပွောမိတော့ သူတို့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျလညျး တဈခါတုနျးကဆရာ တဈယောကျဆီ ဗဒေငျသှားမေးတော့ ညီမလေး ရညျးစား ညီမလေးဆီပွနျလာစခေငျြတယျဆို ညီမလေး မိနျးမကိုယျကို အမြိုးသား တဈယောကျရဲ့ အင်ျဂါနဲ့ ခဏလောကျထိထားပေးရငျ ပွနျလာလိမျ့မယျ.. လို့ပွောသတဲ့
အဲဒီကိစ်စလညျး ဆရာကူညီမယျဆိုလို့ သူတို့ကွောကျပွီးထှကျပွေးလာကွသတဲ့လေ…
ဒါမြိုးဆရာတှတေဈယောကျမကရှိနိုငျသေးတယျ။ဒီလို ကိစ်စတှကေို ဘယျလို ကိုငျတှယျကွမှာလဲ…။
ခုပဲ သတငျးတဈပုဒျတကျလာတယျ စမျးခြောငျး ဟုမျးလမျးနားမှာ ၄နှဈကလေးမလေး ခေါငျးမှာ ဒဏျရာတှနေဲ့ သားမယားအဖွဈဆကျဆံခံထားရတာလဲ တှရေ့ပါသတဲ့။
သကျငယျမုဒိမျးမှုတဈခုမှာ ၅နှဈလောကျ ကလေးမလေးက ဘယျလိုထှကျသလဲဆိုရငျ ….
သမီးလေးရယျ..အဖမေခံနိုငျတော့လို့ပါ သမီးလေးရဲ့လို့ သူ့အဖကေပွောပွီး လုပျလိုကျတာပါတဲ့။
ကြှနျမအဒျေါတှေ နပွေညျတျောကို express ကားကွီးနဲ့သှားကွတာ ပါလာတဲ့ သူတို့ညီမတဈယောကျ ထိုငျနတေဲ့ ခုံကွားထဲကို အနောကျဖကျကနေ လကျကွီးတဈဖကျဝငျဝငျလာပါသတဲ့။အိပျနရေငျးယောငျပွီးနှိုကျမိတာဆိုပဲ။
တခြို့ကောငျတှလေညျး ဘာမှ အလုပျအကိုငျ မညျမညျရရ မရှိတော့ အားအားရှိ မွို့တဈပတျကားလိုကျစီးရငျး ကားပျေါတကျလာတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေိုသူ့ပစ်စညျးနဲ့ ထိထားလိုကျရမှ ၊ ထောကျထားလိုကျရမှ ပှတျသပျလိုကျရမှကနြေပျကွတယျတဲ့။
တခြို့မိနျးကလေးတှေ ညအပွနျ မိုးခြုပျတာရှိတယျ လမျးထောငျ့ကစောငျ့ပွီး သူ့ဟာကွီး လှနျပွလိုကျရမှ အာသာပွတေဲ့ လူတှရှေိသတဲ့..။
ဖဘမှာလဲ တဈဒုက်ခ…အမြိုးသမီး အကောငျ့တှထေဲ သူတို့ အင်ျဂါပုံတှေ လာပို့တယျ..Sex chat နိုငျမှ လာအပျပါဆိုတဲ့ သုတျကွောငျ အကောငျ့မြိုးတှဖေူ့းတယျ။
ကြှနျမသူငယျခငျြးတဈယောကျဆီ ဖဘကနေ အမြိုးသမီးနာမညျနဲ့အကောငျ့ကစာပို့တယျ။Sex chat လားရှငျ့တဲ့..
သူဘအကောငျ့ထဲဝငျကွညျ့တော့မှ စုတျစုတျပွတျပွတျ သကျဆိုးမရှညျမဲ့ရုပျနဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈနတေယျ။
သမီးတပညျ့လေးတဈယောကျဆီလဲ မကွာခငျကပဲ ဖဘကနေ လူတဈယောကျက စာပို့တယျ။မငျးရဲ့စကတျအောကျက ဓါတျပုံကိုငါရိုကျထားတယျ။ဖဘမှာငါဖွနျ့မယျတဲ့….
စကတျအောကျကပုံဆိုတော့ ဘာလဲ ပုရှတျဆိတျလား ၊ခါခဉျြလား၊ဖွဈနိုငျတာပဲလေ…။
ဘယျက ပုံ မှုနျတုနျဝါးတားတှရေိုကျလာမှနျးလဲမသိပါဘူး။လာပွပွီးအခွအေမွဈမရှိဘဲ ထကွောငျတာ ။ရုပျရှငျတှထေဲကလို ခွိမျးခွောကျမယျ လှညျ့ဖြားမယျ ရမလားပေါ့။
သတ်တိရှိတဲ့ မိနျးကလေးက screen shot တှရေိုကျပွီး အမြိုးသမီးရေးရာတှရေော ရဲစခနျးရော တိုငျတော့ ပြောကျသှားပါသတညျးပေါ့…။
အဲဒါမြိုးတှကွေုံခဲ့ရငျ screen shot တှရေိုကျထားဖို့မမပေ့ါနဲ့။ Chat box setting ကိုခြိနျပါ။သူငယျခငျြး မဟုတျတဲ့လူဆီက msgတှေ မဝငျနိုငျအောငျ လုပျထားပါ။
ကြှနျမရဲ့ ကိုယျတှအေ့ဖွဈအပကျြတဈခုကတော့ ဖုံးတဈခုဝငျလာတယျ။ကိုငျလိုကျတော့ အမြိုးသားတဈယောကျ…
အမရေ တဈခုလောကျပွောခငျြလို့ပါ ဆိုတော့ ဘာလဲ ပေါ့။အမရဲ့ေ_ာကျ_ုတျလေးကို ကြှနျတေျာ့ _ီးနဲ့ _ှိုးခငျြလို့ တဲ့။ရုတျတရကျထူပူပွီး ဖုံးခလြိုကျမိတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျမက ဘုနျးကွီးကြောငျးသားလေးတှကေို စာသငျပေးနတော ။
ပတျဝနျးကငျြရဲ့ gender ကြားမ ခှဲခွားမှုအရ ကွီးမွတျတယျဆိုတဲ့ တနျးဝငျနတေဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျကူနှုတျသရမျးတာကို ခံလိုကျရတဲ့ ကြှနျမဟာ အဲဒီအခြိနျမှာ တကယျ မှနျမွတျသောအလုပျတဈခုကို လုပျနခေဲ့တယျ။
ဖုံးက တောကျလြှောကျဝငျနလေို့ ring off လုပျထားရတယျ။နောကျတော့ ဖုံးကိုငျလိုကျတယျ ။ဒါပဲထပျပွောတယျ။မငျးအသကျ ဘယျလောကျလဲ ဆိုတော့ ၂၀တဲ့ ..။
ငါသာ အသကျ၂၀နဲ့ ကလေးအမဖွေဈခဲ့ရငျ နငျဟာငါ့သားအရှယျလို့ပွောပွီး သူ့နံပါတျကို call blocker ထဲထညျ့လိုကျရတယျ။
စဉျးစားကွညျ့တော့ ဝမျးနညျးစရာကွီး စိတျယဉျကြေးမှု ခြို့တဲ့ခွငျးဟာ ကြှနျမတို့ လူမှုပတျဝနျးကငျြအတှကျ ကွီးမားသောဆုံးရှုံးမှူပဲ။
နိုငျငံနဲ့ခြီပွီးပွောရရငျ လူုစှမျးအားအရငျးအမွဈတှေ ဆုံးရှုံးနတောပဲ..။ဒီသတငျးတှကွေားရတာလညျး စိပျလာတယျ။
ကာမဆန်ဒဆိုတာ လူတိုငျးမှာရှိတယျ။အထိအတှဆေို့တာ လူတိုငျးသာယာတတျတယျ။
ဒါပမေဲ့ စညျးတှကြေျောပွီး မွငျမွငျသမြှ သရမျးခငျြနပေါတယျဆိုရငျတော့ တိရိစ်ဆာနျလောကျပဲအသိရှိတယျလို့ပွောရမှာပဲ..။
ဒါမြိုးက မွနျမာပွညျမှာမှမဟုတျဘူး။ နိုငျငံတိုငျးမှာရှိတယျ ။
အမရေိကားမှာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈမြားဆီက ကမ်ဘာ့ အိုလံပဈ ကျောမတီထဲမှာတောငျပါတဲ့ Physiotherapist တဈယောကျ ရဲ့ Sexual abuse ဆိုတဲ့ caseတကျလာဖူးတယျ။
အိုလံပဈထဲပါတဲ့ ကြောငျးသူကြောငျးသား ဆယျကြျောသကျတှေ ကစားကွရငျ အကွောညပျပွနျပွီ ကွှကျသားနာပွနျပွီနဲ့ သူ့ဆီရောကျလာတော့ နှိပျနယျပေးရငျး မဆိုငျတာတှလြှေောကျကိုငျနတော နှဈပေါငျးမြားစှာ…
နောကျတော့ #metoo ဆိုတဲ့ ကြှနျမကိုလဲဒီလိုလုပျတယျ …..ကြှနျမကိုကဒြီလိုပါနဲ့ သူနဲ့ပတျသကျပွီးအသံတှထှေကျလာတော့ ကသြှားတယျ။
ထောငျ ၁၆၅နှဈ …..လူ၃ခါလောကျပွနျဖွဈလို့ရတဲ့ နှဈကွီးသမားသရေငျတောငျမကြှတျဘဲ အထဲဆကျနရေမှာ..ထားပါတော့..သူမြားနိုငျငံမို့ ကိုယျ့ကိစ်စမဟုတျ..
မွနျမာပွညျမှာ ဒီလောကျအတငျ့ရဲနတေဲ့ အမြိုးသားတှကေို.ဘယျလို ဆုံးမကွမှာလဲ။ဖဘပျေါ ညီညာဖဖြဝြိုငျးဝနျး တကျဆဲနရေုံနဲ့ ပွီးမသှားဘူး။
သဒေဏျခပြါစဆေုတောငျးတော့လညျး သတ်တဝါတဈဦးရဲ့အသကျမို့ နရေငျးထိုငျရငျး အကုသိုလျမြားရတယျ။
ဘာဖွဈလို့ ဒါမြိုးတှလေုပျရလဲဆိုတာ ပညာပေးဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျနိုငျရငျလုပျ မလုပျနိုငျရငျတော့လညျး အလကား ဆနျကုနျမွလေေးတှေ ၊ မွှပှေေးခါးပိုကျပိုကျတှေ ဘယျနားထားရမှနျးမသိတဲ့ခြီးထုပျတှပွေုမရပွငျမရ ရိုငျးစိုငျးယုတျမာတဲ့ အောကျတနျးစားတှေ သုတျကွောငျဖို့ကလှဲလို့အဖွဈမရှိတဲ့ဟာတှေ…
သေ..အေးရော မွနျမွနျ သတျပဈလိုကျ ကောငျးတယျ….။
ဒီလိုမြိုးမုဒိနျးမှူတှေ မဖွဈရလအေောငျ share ပေးကွပါလို့တောငျးဆိုပါရစေ…။
Previous Article ရွာလုံးကျွတ် ငါးတွေဖြစ်သွားကြသော ဒဏ္ဍာရီနှင့် ဒေါင်​ဒင်​အင်း ငါးဖမ်းပွဲအကြာင်း
Next Article မယားငယ်ကို အိုင်ဖုန်း ဝယ်ပေးရန် မိမိဂွေးဥ မိမိ ဖြတ်ရောင်းသော်လည်း မိန်းမဖြစ်သူက ရဲကို တိုင်သဖြင့် အဖမ်းခံရ